Xubuntu 19.04 inomira kupa 32-bit rutsigiro | Linux Vakapindwa muropa
Anenge makore gumi apfuura, Apple yakaisa chipikiri chekutanga muguva reFlash Player. Nekufamba kwenguva takazoona kuti yaive tekinoroji yechinyakare uye ine njodzi, ndosaka mabasa mazhinji akaita kutamira kuHTML5. Ini ndinofunga kuti neshanduko iyi tese tinohwina, asi handi shanduko dzese dzakanaka. Uye ndeyekuti mazhinji masisitimu anoshanda haachatsigire makumi matatu nembiri, chimwe chinhu chakatanga kuita Ubuntu 19.04 kubva China yapfuura.
Iyi sarudzo yakaitwa nevhoti yakaitika muna Zvita uye timu dhaiza kuti vashandisi vanoda kuenderera vachishandisa Xubuntu vanogona kuzviita pane avo vhezheni v18.04 iyo inotsigirwa kusvika 2023. Kubva ipapo, vashandisi vane 32-bit komputa vanofanirwa kufunga kuti havazogashiri zvimwe zvekuvandudzwa kana kuchinjira kune inoshanda system inoenderera ichitsigira iyo yekuvakisa. Idzi inhau dzakaipa kune vese avo vane 32-bit komputa iyo ichiri kushanda nemazvo, sezvo Xubuntu iri imwe yeanoreruka masisitimu anoshanda ari chikamu chemhuri yeUbuntu.
Xubuntu 19.04 inowana AptURL link rutsigiro
Xubuntu 19.04 Disco Dingo inosanganisira nhau dzakakosha, senge kudzoka kweGIMP, AptURL batanidza rutsigiro, Linux Kernel 5.0 kana iyo nyowani vhezheni Xfce 4.13.3. Kufanana nedzimwe hama dzese, iyo vhezheni nyowani inosanganisira zvekare mavhezheni ayo ezvishandiso zvekushandisa, pakati pawo ari Parole Media Player, iyo Thunar faira yekuongorora kana Firefox.
Ini pachangu, izvi zvinoita senge yakaipa nyaya kwandiri, uye zvakanyanya kana ndikafunga nezvezvikwata zvine dzimwe nhengo dzemhuri. Ndinoyeuka ndichimutsa komputa naXubuntu makore apfuura uye kubva pakuva inononoka komputa kune inoshanda zvizere. Ichokwadi kuti ikozvino haina kunge sechiedza senge imwe nguva yapfuura, asi Xfce ichagara isingareme kupfuura GNOME kana KDE. Iwe unofungei kuti Xubuntu 19.04 haichasanganise rutsigiro rwe32bits?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Chipikiri chitsva muguva rayo: Xubuntu 19.04 inomira ichipa 32-bit rutsigiro
Zvakanaka, usazvitende, kwete. Ndakave neXfce uye KDE pakombuta yangu (isina Akonadi, hongu) uye hazvichakwanise kutaura nemufaro kuti Xfce ichagara yakareruka kupfuura KDE.
andresinio asha akadaro
Zvakanaka, XFCE haisati yaenda kune gtk3 zvakakwana, yakawedzerwa kuchokwadi chekuti shanduko dzayakawana dziri kumahombekombe dzakatengwa ne kde, zvinogona kufungidzira kuti hauna kushandisa yakachena xfce.
Yakachena Xfce inofanirwa kudya isingasviki 400mb yegondohwe risina basa,% mashandisirwo eprosesa anosiyana zvichienderana nekugona kweprosesa asi haifanire kukumbira yakawanda kana.
Zvakanaka ini handina kushandisa kde kubvira vhezheni 4.0 (ubuntu 7.04) saka ndiri kuzokupa iwe mukana wekusahadzika.
Pindura andresinio asha
Zvakanaka ini ndinofunga kuti mumakore achangopfuura a Windows 10 lite yekutanga (pamberi pechirangaridzo chiitiko) inonyanya kukwikwidza mumakomputa ane pakati pe512mb uye 3Gb yegondohwe ndangariro kupfuura madhiri aive akareruka panguva iyoyo.
Izvi zvinokonzerwa neshanduko muLinux kernel mumakore achangopfuura pamwe nekuuya kwe gtk 3 uye QT4 + iyo yakadzosera zvakare pasuru yekushandisa. Iko kushanduka kwechisikigo kunogona kugadziriswa dai pakange pasina kupatsanuka maererano nematafura akareruka
Ini handirwisane nekuparadzaniswa, asi inorasikirwa nezvayinoreva pamatafura asingaremi.